डडेल्धुराका ७० वर्षीय चर्चित खीर बाजे : जसको मासिक दुई लाख आम्दानी ! – AB Sansar
November 3, 2020 adminLeaveaComment on डडेल्धुराका ७० वर्षीय चर्चित खीर बाजे : जसको मासिक दुई लाख आम्दानी !
सुदुर समाज – डडेल्धुरामा एक जनाले खीरको व्यापारबाट मासिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दनी गर्ने गरेका छन्। डडेल्धुरा गान्यापधुरा गाउँपालिका–१ साहु खर्कका शेरबहादुर देउवाले भीमदत्त राजमार्गअन्तर्गत साहु खर्कस्थित विगत तीस वर्षदेखि खीर बेच्दै आएका छन्। ‘खीर बाजे’का नामले परिचित देउवा मासिक एकददेखि दुई लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। सत्तरी वर्षीय देउवा अहिले पनि सक्रियरुपमा खीर बिक्री गर्न सफल व्यापारी छन्। ढल्कँदै गरेको उमेर भए पनि आजभोलि उनी अहोरात्र खटिएर खीर व्यवसाय गरिहेका छन्। ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, *****
खीर व्यवसायबाटै लाखौँ रुपैंयाँ आम्दानी गर्न सफल भएका देउवाका छोरा पनि अहिले खीर व्यवसायमा नै बुबाललाई सघाउँदै आएका छन्। भीमदत्त राजमार्गमा यातायात सञ्चालन शुरु भएसँगै खीर व्यवसाय गरेका देउवाको सिको गर्दै आजभोलि साहु खर्कमा करीब एक दर्जन खीर पसल स्थापना भएका छन्। प्राकृतिक हिसाबले पनि रमणीय रहेको साहु खर्क क्षेत्रलाई बाजेको खीर पसलले झनै चर्चामा ल्याएको छ। आजभोलि साहु खर्कलाई खीर बजारका नामले चिनिँदै आएको छ।****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, *****
गरिबलाई सार्वजनिक स्थलमा खाना खुवाउदा सरकारको बेइज्जत भयो …